वास्तविकता यस्तो छ– महिलाभन्दा पुरुषमा बाँझोपन धेरै | Ratopati
वास्तविकता यस्तो छ– महिलाभन्दा पुरुषमा बाँझोपन धेरै
personदीपेन्द्र राई exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २२, २०७५ chat_bubble_outline0
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो श्रीमतीबाट सन्तानसुख नभएपछि एक शिक्षकले चौथोपटक बिहे गरे । बाँझोपनबारे चेक–जाँच नगरे पनि आफू ठीक भएको धादिङे शिक्षकको जिकिर थियो । चिकित्सकले चेक–जाँच गर्दा उनको शुक्रकीट नै थिएन ।
चौथो बिहे गर्ने शिक्षकको बाँझोपनले तीन÷तीन श्रीमतीलाई कत्ति पीडा भयो होला ? पुरुषमा पनि बाँझोपन हुन्छ भनेर जनचेतना नहुँदा पारिवारिक विखण्डन भएको छ । कतिपय महिला घरबाट निकालिएका छन् । कतिपयलाई बाँझी भनेर घरमा गरिने शुभकार्यबाट टाढै रहन सुझाइन्छ । बाँझोपनले निम्त्याएको पारिवारिक विखण्डन र तनाव डरलाग्दो देखिन्छ ।
‘जीवनशैली नै हो,’ डा. तुम्ला शाहले भनिन्, ‘धूमपान, मद्यपान, खानपानलगायतले पुरुषमा बाँझोपन बढी देखिएको हो ।’
जीवनशैलीबाहेक पुरुषमा बाँझोपन हुनुका कारण उसको जनेन्द्रियमा ट्युमर, ‘सिस्ट’ छ भने शुक्रकीट बग्ने बाटो बन्द हुन्छ । त्यसो भएपछि शुक्रकीटको मात्रा कम हुन सक्छ । शुक्रकीट ठीक मात्रामा भए पनि ‘नर्मल’ नहुन सक्छ ।
सम्बन्धित पुरुषको पेसागत कामले असर पार्दोरहेछ ।
‘वाल पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन, एक्स–रे, एमआरआईसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने पुरुषको शुक्रकीटको मात्रा कम देखियो,’ डा. शाहले थपिन्, ‘शुक्रकीट ठीक छ भने एबनर्मल (डब्बल हेड, पुच्छर नभएको) शुक्रकीट पाइएको छ ।’
त्यसपछि ‘ट्युब ब्लक’ छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । पुरुषको शुक्रकीटको मात्रै एकदमै कम छ भनेमात्रै टेस्ट्युब बेबीमै जानुपर्छ ।
कसैकसैलाई दुई÷चार सयको औषधि सेवन गराउँदै गर्भवती हुन्छन् भने कतिपयलाई १५÷२० हजार रुपैयाँ खर्चेर उपचार गराउँदा पनि सम्भव भइरहेको हुँदैन । उपचार खर्च प्रत्येक व्यक्तिमा निहित हुन्छ । उनको समस्याअनुसार औषधोपचार गर्नुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार खर्च हुन्छ । उदाहरणका लागि ‘ट्युब ब्लक’ छ भने शल्यक्रिया गर्दा खर्च हुने नै भयो । ट्युब ब्लक खोल्दा ल्याप्रोसकोपी सर्जरी गरे ३५ देखि ४० हजार र ओपन सर्जरी गर्ने हो भने २५ हजारजति लाग्छ । उपचार खर्च अस्तालअनुसार हुन्छ । उपचार सरकारी कि अस्पतालमा गराउने त्यसमा भर पर्छ ।
‘बाँझोपन उपचारका लागि पुरुष आउनै चाहँदैनन्,’ उनले खुसी व्यक्त गरिन्, ‘पछिल्लो समय पुरुष सकारात्मक देखिएका छन् । उनीहरू पनि चिकित्सकसँग परामर्श लिन थालेका छन् । सुखी परिवार क्लिनिकले बाँझोपन उपचारका लागि आउने महिलालाई श्रीमान् अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने प्रावधान छ । नत्र उपचार गरिँदैन । श्रीमान् श्रीमतीको जाँच गरेपछि समस्या कसको हो भन्ने पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ ।’
बाँझोपनले नेपाली महिला पीडित देखिन्छन् । ‘महिलाले महिलालाई सहयोग गरेका छैनन्,’ २५ हजारजनालाई सन्तानसुख दिएकी उनको एउटै सपना छ, ‘नेपाली महिला सबै आमा बनेको हेर्न, सुन्न र देख्न पाऊँ ।’